Angry Birds2Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Angry Birds ဂိမ်း 2
Angry Birds ဂိမ်း2APK ကို
အခမဲ့ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာ join နှင့်သင့် Angry Birds သည်ယခုအခါစွန့်စားမှု Slingshot start! သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူရေးအဖွဲ့တက်, အဆွေအမျိုးကိုသိမ်းနှင့်အားလုံးဂိမ်းအသစ်သည် Modes အတွက်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ဖြစ်ရပ်များပေါ်ယူပါ။ သင်သည်သင်၏ငှက်တို့သည်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထုတ်အဲဒီမှာအများဆုံးရဲ Angry Birds ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား
Angry Birds ဂိမ်း2သည့်အထင်ကရဇာတ်ကောင်အားလုံးသိကြနှင့်ကစားသမားသန်းပေါင်းများစွာ၏နှလုံးသားများ (နှင့်အားလပ်ချိန်မှာအချိန်) ဖမ်းဆီးရမိသောပျော်စရာဂိမ်းတွေ့ကြုံခံစားရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
● Multi-stage Level ။ မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအဆင့်ဆင့်အားစိန်ခေါ်ပျော်စရာ Play - ရုံသူတို့အားသူဌေးကဟူသည်မှာအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်!
●နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုတွေကို။ တစ်မိနစ်ရှိပါသလား? နေ့စဉ်စိန်ခေါ်မှုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အချို့သောမြန်ဆန်ဆုလာဘ်ဝင်ငွေ။
●အဆင့် UP သင့်ရဲ့ငှက်တို့သည်အတောင်တော်အမွေးနှင့်အတူနှင့်၎င်းတို့၏အမှတ်ပေးပါဝါတက်။ အဆုံးစွန်သိုးစုကို Build!
●ကမ္ဘာတဝှမ်းမိတ်ဆွေများနှင့်ကစားသမားများနှင့်အတူဝက်ကိုဆင်းယူတစ်ဦးက Clan JOIN ။
●တန်ခိုးကြီးသောလင်းယုန်ရဲ့ Bootcamp အတွက်ခွန်အားကြီးသော Eagle အထင်ကြီးနှင့်သူ၏သီးသန့်ဆိုင်အတွက်သုံးစွဲဖို့ဒင်္ဂါးပြားဝင်ငွေ။
●အဆိုပါ Arena အတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ အခြို့သောဖော်ရွေငှက်စိုကျပပျော်စရာအခြားကစားသမားများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးသူသည်သက်သေပြ။
●အသုံးမကျသောဦးထုပ်ကိုစုဆောင်းပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောပျော်စရာ themes များနှင့်အတူဦးထုပ်စုဆောင်းနှင့်သင့်သောငှက်များ '' ဖက်ရှင်ဂိမ်းတက်မြင့်။ ●ဆိုး piggy ။ အစိမ်းရောင် baddies အားကောင်းပြန်ဖြစ်ကြသည် badder နှင့်ပင်စိမ်းလန်းတဲ့။
● Level အများကြီး။ ပိုပြီးပုံမှန် update များနှင့်ကန့်သတ်အချိန်ဖြစ်ရပ်များအတွက်ဆက်ပြောသည်နှင့်အတူအဆင့်ဆင့်ရာပေါင်းများစွာ Play ။
● LEADERBOARD ။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးဆောင်ပေါ်ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးသူသည်သက်သေပြ။
●ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့! - Angry Birds ဂိမ်း2ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ Angry Birds ဂိမ်း2အခမဲ့ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရနိုငျသျောလညျးရရှိနိုင် optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုရှိပါသည်။
သိုးစုကိုအဆိုပါ Angry Birds ဂိမ်း Movie,2များအတွက်အဆင်သင့်ဆိုတော့နေသည်။
- ရန်သူများ frenemies ဖြစ်လာသည်။ အစဉ်အဆက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, ဝက်တစ်ဦးအားဖွင့ ်. ဇာတ်ကောင်အဖြစ်သိုးစုကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြသည်တကား တစ်ဦး "အပိုငှက်" အဖြစ် Leonard ကသော့ဖွင့်ခြင်းနှင့် Zetas, ရုပ်ရှင်ကနေရေခဲလူကြမ်းအနိုင်ယူ!
- နယူးဦးထုပ်အဖြစ်အပျက်။ Brrr - ဒါဟာလင်းယုန်ကျွန်းပေါ်အအေးပဲ! အထူးဦးထုပ်ဖြစ်ရပ်ကစားရန်ရုပ်ရှင်များတွင် featured ဆောင်းရာသီမှာဂီယာစုဆောင်းပါ။
204.28 ကို MB
Rovio Entertainment ကကော်ပိုရေးရှင်း